‘पैसा खर्च नगरी हिट हुने जमाना गएछ’
पवन बराइली काठमाडौं, २२ साउन
नेपाली गीतसंगीतको नौलो नाम होइन, विश्व नेपाली । उनी शिक्षण पेसासँगै नेपाली गीतसंगीतमा झन्डै दुई दशकदेखि सक्रिय छन् । विश्वले दर्जनौं गीतमा आवाज दिएका छन् । उनको ‘भन के छ बन्दोबस्त’ ‘कवि देवकोटा’, ‘मीठो साह्रै मीठो’लगायतका गीत चर्चित छन् । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा लामो संघर्ष गरेका उनै विश्वसँग सांगीतिक जीवन, संघर्ष र आगामी योजनाबारे शिलापत्रले गरेको कुराकानी :
गीतसंगीत क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो बाल्यकाल पारिवारिक सांगीतिक माहोलमा बित्यो । म ६/७ वर्षको उमेरदेखि टेलिभिजनमा फिल्म हेर्थें । फिल्मको गीत नै गुनगुनाइरहेको थिएँ । दाइले मलाई गीत गाउन चान्स दिनुभयो । ६ वर्षको हुँदा दाइले एउटा गीतको टुक्रा गाउन लगाउनुभयो । त्यो गीतको टुक्रा गाएपछि सबैले प्रशंसा गर्नुभयो ।
स्कुलका विभिन्न कार्यक्रममा गीत गाउँथें । त्यसबेला प्रथम भएँ । मीठो गीत गाएकै कारण विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर जुरेको थियो ।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सांगीतिक प्रतियोगिता ‘तिम्रो सुर मेरो गीत’ मा भाग लिएको थिएँ र त्यसमा पनि प्रथम भएँ । एसएलसी दिएपछि संगीता राणा प्रधानसँग झन्डै ४ वर्षसम्म शास्त्रीय संगीतको औपचारिक कक्षा लिएँ । यसरी नै जीवनको लक्ष्य बन्न पुग्यो ।
तपाईंले औपचारिक रुपमा रेकर्ड गरेको पहिलो गीत कुन हो ?
‘मेरो सिंगो संसार’ हो । यो गीतले दर्शकको साथ खासै पाएन । म भर्खर गीत संगीतमा हुर्कंदै थिएँ । गीतसंगीतबारे त्यति धेरै ‘आइडिया’ पनि थिएन ।
गीतसंगीतमा लाग्न कतिको संघर्ष गर्नुपर्‍यो ?
आर्थिक अभावका कारण सुरुवाती दिनमा एल्बम निकाल्न गाह्रो हुन्थ्यो । मलाई परिवारले सहयोग गर्ने भएकोले केही सहज भयो त्यसैले आफ्नै खालका थुप्रै संघर्ष छन् ।
तपाईं लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । आफैंले आफूलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
कलाकारका लागि गीत संगीत महासागर हो । यो महासागरमा म पनि पौडिँदै छु । आफूलाई संगीतको विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु । संगीतलाई जति गहिराइमा बुझ्दै गयो, त्यति नै गहन लाग्छ । गीतसंगीतमा केही गरौं भन्ने प्रतिभा हुँ त्यसैले सिक्दै गीतसंगीतमै रमाइरहेको छु ।
गीत गाएर बाँच्न सकिन्छ ?
गीत गाएर जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय गायन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जीवनमा एकैचोटि ठूलो सपना बोक्नुहुँदैन । एकैचोटि शिखर पुग्ने सपना लिनु मूर्खता हो । गीत संगीत सजिलो विधा होइन । साधना पनि चाहिन्छ त्यसैले राम्रो गर्छु भनेर गीत संगीतमा लाग्यो भने बाँच्न सकिन्छ ।
पहिले र अहिलेको गीतसंगीतमा के कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
अहिले प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ । युट्युब र फेसबुक आए । पहिले क्यासेट तथा रिलको जमाना थियो । गीत निकाल्यो, कम्पनीलाई लगेर क्यासेट बुझायो । सीआर बीटी, पीआर बीटी र रेडियो टेलिभिजनमा प्रमोसन हुन्थ्यो । यसको सट्टामा युट्युब आएको छ । अहिले अधिकांशले युट्युबबाटै मनग्य पैसा कमाएका छन् । तर, कतिपय कलाकारलाई युट्युब भन्ने कुरा नै थाहा छैन । त्यसबाट कसरी पैसा कमाइ हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अहिले आफूसँग भएको कला प्रस्तुत गर्न सजिलो छ । तर, यसले बेफाइदा पनि गरेको छ ।
भने पछि तपाईंहरुका लागि युट्युबले बेफाइदा गर्‍याे ?
अहिले पैसा खर्च नगरी कुनै पनि गीत चल्दैन । दुःख गरेर गीत निकाल्यो तर बुस्ट गर्नुपर्छ । पैसा हुनेले खर्च गर्ला तर पैसा नहुने कसरी गर्छ ? अहिले यो जटिल विषय बनेको छ ।
युट्युब गतिलो प्लेट फर्म हो । यसलाई सही रुपमा प्रयोग गर्यो भने फाइदा पनि पुर्‍याउँछ । पछिल्लो समय भाइरलको नाममा अधिकांश कलाकार लागिपरेका छन् । भाइरल भनेको हैजा पनि हो । यसले सिंगो गीतसंगीतलाई असर पुर्‍याउँछ ।
भाइरलको लोभले सस्ता शब्द गीत आउन थाले । भल्गर शब्दका गीत पनि लाखौं भिअर्स पुग्छ । तर, एउटा प्रतिभावान गायकले गहकिलो शब्द छानेर गाएको गीत छायामा पर्छ । यस कारणले पनि गायक गायिकालाई तनाव सिर्जना गरेको छ ।
भने पछि झन् गाह्रो बनाइदियो युट्युबले ?
कलाकारिता व्यापार होइन । यो विशुद्ध आफूभित्र भएको प्रतिभा हो । तर, अहिले पैसासँग दाँज्न थालिएको छ । पैसा खर्च नगरे गीत नै नचल्ने । अहिले जे छ, पैसामै छ ।
भविष्यमा कस्ता गीत गाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
मैले प्रायः सेन्टिमेन्ट गीतहरु मात्रै गाउँथे । पछिल्लो समय रिलिज भएका ‘मीठो साह्रै मीठो’ र ‘आएँ म त चिटिक्कै परेर’ बोलको गीतले सबैको मन जिते त्यसैले शब्द भाइरलको नाममा जस्तो पायो, त्यस्तो गीत गाउँदिनँ । दर्शकलाई मन छुने रमाइला गीत गाउने रहर छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६, ०९:४१:००